ओली-प्रचण्ड वार्ता जारी : एकताबारे निस्केला त निष्कर्ष ? - विवेचना
ओली-प्रचण्ड वार्ता जारी : एकताबारे निस्केला त निष्कर्ष ?
February 12, 2018 321 Views
काठमाडौं । वाम गठबन्धनको एकतामा अन्योल भइरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच वार्ता सुरु भएको छ। ललितपुरको मानभवनमा बिहान साढे ९ बजेदेखि दुई नेताबीच नेतृत्व व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल सुरु भएको हो।
केही दिनअघि चितवनमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘फड्को हान्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा एकता प्रक्रियाका बारेमा शंका व्यक्त भएको थियो। आज दुई अध्यक्षबीच निर्णायक छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक ओलीलाई र एक आफूलाई हुनुपर्ने माओवादी अडान देखिन्छ। केही दिनअघि नेपाल टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले ‘अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक एमालेले रोज्ने र छोडेको जिम्मेवारी आफूले सम्हाल्ने’ आसय व्यक्त गरेका थिए।
फागुन दोस्रो साताभित्रै सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको एमाले त्यसअगावै माओवादीसँग एकताको खाकामा सहमति खोज्ने तयारीमा छ।
माओवादीसँग पार्टी अध्यक्षमा कुरा नमिलेका कारण एकता प्रक्रियामा ढिलाइ नभएको एमाले भनाई छ। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्- ‘दुई अध्यक्षबीच कुराकानी निकै नजिक पुगेको छ। नेताहरूको व्यवस्थापनका कारण ढिलाइ भएको होइन।’
Previous नेपाल आज केन्यासँग भिड्दै
Next रेडक्रसको बदमासी : राज्यलाई छलेर ५ अर्ब खर्च
पूर्वजनमुक्ति सेनाको आपत्ति
Pingback: อยาก ได้ เงิน ภายใน วัน นี้